သင့်အရေပြားကို ထိခိုက်စေသော အံ့ဖွယ် အိမ်သုံးပစ္စည်းငါးမျိုး - Page 20 of 23 - Hello Sayarwon
သင့်အရေပြားကို ထိခိုက်စေသော အံ့ဖွယ် အိမ်သုံးပစ္စည်းငါးမျိုး
Dr.Aye Myat Myat Noe မှ ရေးသားသည်။ မနေ့က တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ထင်မထားမိတဲ့ သာမန်အိမ်သုံးပစ္စည်းလေးတွေကနေ အရေပြား ထိခိုက်ယားယံမှု၊ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်မှုတွေ ခံစားရနိုင်တယ်ဆိုတာ သိပါရဲ့လား။ အကြောင်းကတော့ သင်က ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ထိခိုက်စေမှုလေးတွေကို သတိမထားမိဘဲ အဲ့ဒါတွေကို ပုံမှန်သုံးနေလို့မိပါ။ အောက်ကစာရင်းကိုကြည့်မိရင် လန့်သွားမှာအသေအချာပါပဲ။
သန့်စင် ပစ္စည်း၊ ဆပ်ပြာ
ခေတ်မီလာတဲ့ ဒီကာလကြီးမှာ ရောဂါပိုးမွှားတွေကို ကြောက်တတ်လာကြောင့် အမြဲသန့်ရှင်းနေချင်ကြမှာပါ။ ဒီအခါ အရေပြားကို လိုတာထက်ပိုပြီး ဆေးကြောမှုတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ လိုတာထက်ပိုပြီး ဆေးကြောမိတဲ့အခါ အရေပြားစိုစွတ်မှုကို ထိန်းပေးပြီး ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ အဆီတွေကို ဖယ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ထိုအခါ အရေပြား ခြောက်သွေ့၊ယားယံခြင်းတွေ ဖြစ်လာတော့တယ်။ ထို အခြေအနေကို အမြန်မကုသဘူးဆိုရင် အရေပြား အက်ကွဲခြင်းတွေ၊ သွေးထွက်ခြင်းတွေပါ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဓါတုပစ္စည်းတွေ၊ အမွှေးနံ့တွေပါတဲ့ သန့်စင်ပစ္စည်းတွေ ဆပ်ပြာတွေကလည်း သင့်အရေပြားကို ထိခိုက် ယားယံစေပါတယ်။ Triclosan နဲ့ ethyl alcohol ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဟာ သင့်အရေပြားကို ဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေတောင် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
တတ်နိုင်သလောက် သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဆပ်ပြာတွေ၊ သန့်စင်ပစ္စည်း အပျော့စားတွေကိုသာ သုံးကြည့်ပါ။ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ တစ်နေရာစီအတွက် သက်ဆိုင်ရာ သန့်စင်ပစ္စည်း အသီးသီး လိုပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ် အတွက်သုံးတဲ့ပစ္စည်းဟာ မျက်နှာအတွက် သုံးတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ မတူပါဘူး။ သင်အသုံးပြုနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေက သင့်အရေပြားမှာ ယားဖုတွေ အနီဖုတွေ ပေါ်စေရင် ဒါမှမဟုတ် အရေပြားကိုပူလောင်လာစေရင် အဲဒီအရာတွေကို ဆက်ပြီးမသုံးပါနဲ့တော့။ သုံးစွဲရမယ့် ဆပ်ပြာတွေ သန့်စင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခက်တွေ့နေတယ်ဆိုရင် အရေပြား ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါသုံးတစ်ရှူးတွေဟာ သုံးပြီးတဲ့အခါ ပြန်လျှော်စရာမလို၊ လွှင့်ပစ်လိုက်ရုံမို့ သုံးရအလွန်ကို အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအရာတွေမှာလည်း အရက်ပျံ၊ အမွှေးရည်၊ အရောင် နဲ့ တာရှည်ခံအောင် လုပ်ထားတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေ ပါနေတုန်းပါပဲ။ ဒါတွေဟာ ယားဖုတွေနဲ့ အင်ပြင်တွေလို ဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
လက်ကိုင်ပဝါလို ဓါတုပစ္စည်းမပါတဲ့ လျှော်လို့ရတဲ့ အဝတ်တွေကို ပြောင်းသုံးကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လျှော်ဖွတ်ပြီး ကောင်းကောင်း အခြောက်ခံဖို့တော့ လိုတာပေါ့။ သွားတဲ့လာတဲ့ အခါမှာတော့ တစ်ခါသုံးအိတ်တွေထဲ ထည့်သယ်သွားနိုင်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့် နီကယ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ လက်ဝတ်လက်စားတွေကို ဓါတ်တည့် ဖြစ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဇစ်၊ နာရီကြိုး၊ အကြွေစေ့၊ မျက်မှန်ကိုင်းတွေကို နီကယ်တွေနဲ့လုပ်တတ်ကြတယ်။
ထိုအရာတွေနဲ့ အထိအတွေ့များတဲ့အခါ နီကယ်နဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ လက္ခဏာတွေကတော့ ယားယံခြင်း၊ ယားဖုတွေပေါ်ခြင်း၊ အဖုများပေါက်ခြင်း၊ နီရဲလာခြင်း၊ အရေပြားမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုပေါက်ခြင်း၊ ခြောက်ကပ် အက်ကွဲသော အကွက်များဖြစ်လာခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ထိုလက္ခဏာများ ဖြစ်လာပြီး ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတယ် ဆိုတာမသိရင် ဆရာဝန်ပြဖို့ အကြံပေးပါရစေ။
ကုသမှုတွေက လက္ခဏာတွေကိုလျှော့ချဖို့ပဲ သုံးနိုင်ပြီး ဓါတ်မတည့်ခြင်းကို အရှင်းပျောက်အောင် မကူညီနိုင်ပါဘူး။ နီကယ်နှင့် တစ်ခါ ဓါတ်မတည့်မှု ဖြစ်ထားလျှင် အမြဲ ဓါတ်မတည့်ဖြစ်နေမှာမို့ ရှောင်ခြင်းသာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခါတလေ ဒဏ်ရာကို ဆေးပတ်တီး စည်းတာ၊ ပလာစတာ ကပ်တာတွေကနေ အရေပြားနီရဲခြင်း၊ ယားဖုပေါ်ခြင်း၊ ပူခြင်း၊ ရောင်ခြင်းများဖြစ်လာတာကို ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဆိုးတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ အရည်ကြည်ဖု နဲ့အဖုတွေ ပေါက်သည်ထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါဟာ ထိုဆေးပတ်တီးတွေမှာပါတဲ့ ဆေးပစ္စည်းတွေကို ဓါတ်မတည့်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဆေးပတ်တီးတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ဘူးထင်ရင် ချက်ခြင်းဖယ်ပစ်ပါ။ ထို့နောက် ထိခိုက်ထားတဲ့နေရာကို ရေသန့်သန့်နဲ့ သေချာဆေးပြီး ဆေးခန်းသွားသင့်ပါတယ်။ ဓါတ်မတည့်ခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဆေးပတ်တီးတွေကို ရှောင်ရှားပြီး အဝတ်နဲ့ စက္ကူတိတ်တွေကို အသုံးပြုခြင်းက ပိုဘေးကင်းပါလိမ့်မယ်။
သင့်အိမ်မှာ ရှိနိုင်တဲ့ ရာဘာထုတ်ကုန်များသည် ရာဘာနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ ရာဘာလက်အိတ်၊ ရေကူးမျက်မှန်၊ ဒါမှမဟုတ် ဖိနပ်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ လက္ခဏာတွေက ပူမယ်၊ ယားယံမယ်၊ အင်ပြင်တွေထမယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ပြပြီး နောက်ဆို ထိုအရာတွေနဲ့ ထိတွေ့ခြင်းကို ရှောင်ရှားပါတော့။
လက်ဆေးဖို့ သင်သုံးတဲ့ဆပ်ပြာ၊ ဒဏ်ရာကိုစည်းဖို့ သင်သုံးတဲ့ဆေးပတ်တီး၊ နောက်ဆုံး ဖက်ရှင်ကျဖို့ လှဖို့ သင်ဝတ်တဲ့ လက်ဝတ်လက်စားတွေ ကတောင်မှ သင့်အရေပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် သတိထားပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို သေချာဖတ်ကြည့်ကာ မိမိနဲ့ဓါတ်မတည့်တဲ့အရာကို သေချာလေ့လာသင့်ပါတယ်။
1. Surprising Household Irritants.
Accessed March 12, 2017.
2. Combating Common Skin Irritants.
. Accessed March 12, 2017.
3. Nickel allergy.
4. Skin Reactions to Beauty Products.
5. Most Popular Questions About Household Skin Irritants.
အလှအပအတွက် မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ ၁၃ ချက်